आरूका फूल, अभि सुवेदी र म | चितवन पोष्ट
आरूका फूल, अभि सुवेदी र म
तालिमको प्रभावकारिता प्रशिक्षकमै निर्भर
डा. शिव रिजाल
यहाँ पाठकहरुले अभि सुवेदीलाई मैले बुझेको एउटा स्वप्नधारी साहित्यकारका रुपमा भेट्नुहुने छ । अभि सुवेदीका कृतिमाथि नेपाली अनि अंग्रेजी भाषामा विभिन्न समालोचनाहरु लेखिएका छन् । उहा“का व्यक्तित्व र कृक्तित्वमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले शोध तथा अनुसन्धान–पत्रहरु पनि तयार पारेका छन् । त्यस्तै, सुवेदीले विभिन्न लेखहरुमा आफ्नो जीवन अनि साहित्यिक यात्राका बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ । तर, यहाँ पाठकहरुले सुवेदीका केही निश्चित रचनाहरुको साहित्यिक अथवा समालोचनात्मक चर्चा पाउनुहुने छैन, न त सुवेदीका व्यक्तिगत जीवनीमाथि नै यो पूर्ण रुपमा आधारित छ ।
अभि सुवेदीमाथि लेख्दै गर्दा केही प्रसंगहरु मेरा आफ्नै सपनाका यात्राहरुका बारेमा पनि आएका छन्, यसमा । गएको चौध वर्षमा मैले अभि सुवेदीलाई एउटा प्राध्यापक, नाटककार, साथी अनि पिताका रुपमा हेरेको छु । मैले उहा“का निजी जीवनलाई नजिकैबाट निहालेको छु । उहा“का रचनाहरु छापिनुभन्दा पहिले पढ्ने पाठक भएको छु । अनि अर्को कुरा, अभि सुवेदीमाथि यो आलेख तयार पार्दा मैले केही सहज अनि केही कठिन अनुभवहरु पनि गरेको छु ।
मेलै उहा“का सबै कृतिहरु पढेको छु, उहा“का निकै विगतहरु सुनेको छु, उहा“स“ग मिलेर निकै साहित्यिक अनि वैचारिक कर्महरु गरेको छु, अनि उहा“का नितान्त व्यक्तिगत मुडहरुस“ग परिचित छु ।
आफूले अति श्रद्धा गरेको अनि जीवनमा निकै प्रभावित भएको व्यक्तिमाथि लेख्न बस्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई अलि परको अथवा भख्खरै चिन्दै गरेको व्यक्तिका रुपमा लिने अभिनय बेलाबेलामा गर्नुपर्ने हु“दोरहेछ । मलाई यो आलेख तयार पार्दा त्यस्तै केही अनुभवहरु भए । त्यसो त, अभि सुवेदी र मेरा दिनदिनका भेटहरुलाई एउटा बानी मात्रै हुनबाट बचाउन हामी निकै कसरतहरु गर्छौं । नौला कविताहरु पढ्छौँ । केही नया“ सपनाहरुका तानाबाना बुन्छौँ । नया“ ठाउँहरु घुम्न जान्छौँ । आ–आफ्ना लेखका ड्राफ्टहरु पढ्छौँ । यो आलेखलाई मैले त्यस्तै एउटा कसरतको रुपमा लिएको छु । मलाई यो कसरत गर्न लगाउनु हुने उदय अधिकारीजीलाई यहा“ धन्यवाद दिँदै म अब आलेखको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु ।
कक्षा कोठामा अभिसर ः
कीर्तिपुर । त्रिभुवन विश्वविद्यालय । अंग्रेजी केन्द्रीय विभागका कक्षा कोठाहरु । पश्चिमेली भाषा विज्ञान र साहित्यमाथि दूर देश र कालमा लेखिएका चिसा सिद्धान्तहरु अनि अंग्रेजी कविताहरु केही सरल नेपाली सन्दर्भ र परिवेशको आ“गनमा बेलाबेलामा टा“गिन आइपुग्थे । हामी त्यस्ता आ“गनस“ग परिचित थियौँ । त्यसैले, त्यसमा टा“गिन आइपग्ुने ती गाह्रा सिद्धान्त र साहित्यिक रचनाहरु हामीलाई कोमल अनि सुन्दर वस्तुजस्तो लाग्न थाल्थे । हामी रमाउ“थ्यौँ । बेलाबेला पूरै कक्षा कोठा आरूका पूmलझैँ एक्कासि हा“सोमा फुटिरहन्थ्यो । हामीलाई आफ्नै जीवन र जगत्का आयामहरु केही खुलेजस्तो लाग्न थाल्थ्यो । तर, ज्ञानका आकाश खुलेका कुरामात्र मुख्य थिएनन् । कक्षा कोठामा रमाइलो मानेर ज्ञान आर्जन गरेको अनुभव गरिरह“दा हामीलाई एउटा अर्कै छुट्टै शक्तिले कतै तानिरहेझैँ हुन्थ्यो । त्यो शक्ति थियो– तिनै पश्चिमी समालोचना अनि साहित्यलाई नेपाली बाइरोड हुँदै हामीसम्म डेलिभरी गरिरहने एउटा वाचाल चालक, प्राध्यापक अभि सुवेदीको व्यक्तित्व ।
झन्डै–झन्डै पचास वसन्तहरु गाएको मुरलीजस्तो पातलो अनि अग्लो वनावट भएको शरीर । अनुहारमा बसिरहने एउटा चम्किलो आकर्षक आभा । लामो समयदेखि अक्षरपछाडिका निकै आकाशहरु देखेको अनि आकाशभन्दा पर लुकेका निकै शब्दहरु समाएर ल्याउन भ्याएका कुनै सन्त योगीका जस्ता देखिने उज्याला आ“खाहरु । चम्किरहने तालुपछाडि देखिने एक मुठी शुभ्र केशराशी । गलामा बसिरहने हलुका रंगीन सिल्क कपडाको स्कार्फ । अनि क्षितिजपारिबाट विस्तारै केही ज्ञानका पुञ्जहरु तान्दै ल्याइरहेका प्राध्यापक अभि सुवेदीका कर्णप्रिय आवाजहरु ।
अभिसरका क्लास सिध्याएर बाहिर निस्क“दा हामीलाई केही मह¤वपूर्ण रहस्यहरु पहिलोचोटि खुल्थे । ज्ञानका चिसा अनि गह्रुंगा डल्लाहरुस“ग खेल्ने मानिसका पनि आकर्षक व्यक्तित्व हुन सक्छ । विश्वविद्यालयका कक्षा कोठामा प्राध्यापन गर्ने मानिस पनि यो देशले नै मान्ने एक जना नायक हुन सक्छ । प्राध्यापक अभि सुवेदीलाई कक्षा कोठामा देख्दा अनि सुन्दा हामीलाई जीवन र ज्ञानका केही तिर्खा मेटिएजस्तो हुन्थ्यो । हामी केही बलिया भएको अनुभव गर्न थाल्थ्यौँ । गाह्राभन्दा गाह्रा विषयवस्तुलाई पनि सरल र रमाइलो ढंगमा बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ । यो अनुभव गर्दा, हाम्रा लेखक अनि प्राध्यापक हुने सपना केही छिनका लागि सजिलो भएर बस्न थाल्थे । देशविदेशका लेखक र विचारकहरु पनि प्राध्यापक सुवेदीका आख्यानमा अति जीवन्त भएर बिनाहिच्किचाहट हामीस“ग भलाकुसारी गर्न आइपुग्थे । हामी अलि व्यापक भएको अनुभव गर्न थाल्थ्यौँ ।
हामीले आफ्ना कक्षा कोठामा अलि नगनेका पुरूष अथवा महिला सहपाठीहरु पनि अभिसरका क्लासमा निकै वाचाल हुन थाल्थे । तिनले उठाएका चिन्ता, भ्रम र ज्ञानका स–साना टुक्राहरु अभिसर अति श्रद्धा र मायाले उठाउनुहुन्थ्यो । हामी त्यसलाई रमाइलो मानेर हेरिरहन्थ्यौँ । तर, अभिसर त्यस्ता स–साना विषयलाई अलिअलि गर्दै चिन्तन र बहसको मुद्दा बनाउन थाल्नुहुन्थ्यो । हामी विस्तारै गम्भीर हु“दै जान्थ्यौँ । केहीछिनमा नै ती विचारहरुले अलिकता व्यापकता पाउन थाल्थे । अनि, ती जटिल विषय बनेर क्लासमा एक्कासि उभिन आइपुग्थे । त्यसपछि हामी गम्भीर हुन थाल्थ्यौँ । कापीका पानामा केही टिप्थ्यौँ । कहिलेकाहीँ हामीमध्ये कोहीले केही गाह्रा दार्शनिक विषयवस्तु अंग्रेजी व्याकरण र उच्चारणका नाम्लोले बडो सकसस“ग बोक्दै क्लासमा अभिसरको अगाडि गर्लम्म पछारी दिन्थ्यौँ । त्यसो गर्दा हामी दर्शनले भ्याउनेभन्दा पनि अझ बढी गम्भीर हुन्थ्यौँ । अभिसर त्यसलाई थपक्कन उठाउनुहुन्थ्यो र बिस्तारै खेलाउन थाल्नुहुन्थ्यो । हामी अचम्म मानेर हेर्न थाल्थ्यौँ । अनि त्यो भीमकाय विचार पिउरीझैँ स–साना टुक्रामा उड्न थाल्थे । हामी छक्क परेर हेथ्र्यौं । एकछिन हा“स्थ्यौँ । यसरी हामी साधारणभन्दा साधारण साहित्यिक अनि दार्शनिक विषयबाट गम्भीर धु्रवतर्फ अनि गम्भीरभन्दा गम्भीर त्यस्ता विषयवस्तुहरुबाट साधारणभन्दा साधारण धु्रवतिर दिनका दिन यात्रा गथ्र्यौंं, अभिसरका क्लासमा । रमाइलोमा क्लास सिद्धिन्थ्यो । अरु प्राध्यापकहरुका क्लासमा एकबिटो नोट लेख्न भ्याउने हामी अभिसरका लेक्चर त्यसरी एक्कासि रमाइलै रमाइलोमा सिद्धिँदा कहिलेकाहीँ निराश पनि हुने गथ्र्याैं । क्लास नोट नदिई नै लेक्चर सिध्याउने यी अभिसर कस्ताखाले प्राध्यापक हुन् हो ? हामीमध्ये कति विद्यार्थीहरु शून्यमा प्रश्न गथ्र्यौं ।
अभिसरका क्लासहरु एवम् रितले सिद्धिँद“ै गए । विश्वविद्यालयको परीक्षा आउने बेला आयो । परीक्षा तयारीका लागि क्लास नोटहरु भेला गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो । तर, प्राध्यापक सुवेदीका लेक्चरबाट केही टिपेर राखेका हाम्रा नोटले काम गर्दैनथे । तिनले हामीलाई कल्पनाशील त बनाउ“थ्यो तर जा“चमा के कुरा लेख्ने, यो भन्न हिच्किचाउँथ्यो । तिनले जा“चका चिन्ता अनि कोर्सका किताबहरुभन्दा पर झन् बढी रमाइलो र चुनौतीले भरिएको संसार भएको यथार्थतिर इंगित गर्थे । मार्कसिटमा गतिलो अंक जोड्ने हाम्रा निरीह सपनाहरु घाममा आरूका फूल सुकेझैँ सुक्न थाल्थे । तर पनि सुवेदीका लेक्चरहरु हाम्रा दिनदिनका कुराकानीमा एउटा अर्कै छुट्टै पाठ अथवा रचनाजस्तो भएर आउन थाल्थे ।
उहा“का लेक्चरबाट टिपेको नोटमा हामी भेट्थ्यौँ, सिद्धान्तहरु कहिले पनि गाह्रा हु“दैनन्, यिनलाई साधारण ढंगमा बुझ्न र बुझाउन भने गाह्रो हुन्छ । यही विषयहरुलाई बुझाउन उहा“ले प्रयोग गर्नुभएका नेपाली उदाहरणहरुले हामीलाई स्वतन्त्र भएर लेख्न वा पढ्न प्रेरित गर्थे । त्यस्ता उदाहरणहरुले हामीलाई थप भन्थे । एउटा सिध्दान्तमाथि राखिएको बहसमा यस ब्रह्माण्डको सबै गुह्य कुरा लुकेर बस्न सक्दैन । साधारण भाकामा ज्ञानको खेती गर्नुजस्तो उत्तम कुरा अरु केही हुन सक्दैन । अनि किताबको कुरा गर्नु भनेको त्यसमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुको सार खिच्ने कर्ममात्र होइन । एउटा निरीह प्राज्ञिक हुनबाट बच्न हामीले निकै अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । सुवेदीका लेक्चरहरुले हामीलाई निकै भ्रमहरुबाट मुक्ति दिलाउ“थे । तिनले भन्थे, कवितालाई जा“चमा आउने सम्भावित प्रश्नहरुका उत्तरको धरापमा राखेर पढ्नुहु“दैन । यसलाई आफ्नो जीवनस“ग रगडेर केही आनन्दका झड्का निकाल्न सकिएन भने साहित्य अनुरागी हुन सकिँदैन ।
अभिसरका लेक्चरहरुले हाम्रा सोचाइमा केही विचलनहरु ल्याउँथे, तिनले भन्थे । अंग्रेजी भाषा अनि यसमा लेखिएको साहित्यमा ज्ञान बढाउने जोसमा आफ्नो समाज र संस्कृति बिर्सनुहु“दैन । अंग्रेजी भाषालाई उच्चारणमा मात्र सीमित गरियो भने निकै रमाइलो जोक्कर होइन्छ । दुई–चार वर्ष बेलायत अथवा अमेरिकामा उच्च अध्ययन गरेर स्वदेश फर्केका प्राध्यापक अथवा विचारकहरुले तिनले आफ्नो विषयमाथि ज्ञानमात्र आर्जन गरेका हु“दैनन्, नेपाली समाज र संस्कृतिबारेमा निकै भ्रम पनि लिएर आउने गर्छन् । हाम्रो समाज र संस्कृति पनि अति अस्थिर, अनि जटिल छ । त्यसैले, हाम्रो सामाजिक अनि सांस्कृतिक परिवेश बुझ्न विदेशी साहित्य र सिद्धान्तमा मात्र निर्भर हु“दा कमजोर होइन्छ । विदेशी अनुसन्धानकर्ता अथवा विद्वान्हरुले नेपालमाथि वर्षौं रिसर्च गरेर पनि भेट्न वा समात्न नसकेका हाम्रा सामाजिक र सांस्कृतिक विषयहरु छन् । अभिसर भन्नुहुन्थ्यो, शुध्द नेपालीभाषी अनि संस्कृत दर्शन र विचारहरुले पनि निकै जोक्करहरु निकालिरहेका हुन्छन् । तर, भारतीयलगायत अन्य उत्तरऔपनिवेशिक राज्यका विचारक अनि लेखकहरुले अंग्रेजी र तिनका आफ्नै मातृभाषा र साहित्यमाथि जमाएको सिर्जनशील राज्य धेरै चाखलाग्दा छन् । अभिसरका क्लासमा हामी एकछिन हराउँथ्यौँ । एकछिन मरीमरी हा“स्थ्यौँ । केहीछिन कमजोर भएको अनुभव गथ्र्यौं । अनि, बेलाबेलामा आफ्ना जीवन र सपनाका लागि चाहिने केही ऊर्जा लिएको अनुभव गथ्र्यौं ।
हामी एमए पहिलो वर्षको जा“च दिन बस्दा नबस्दै प्राध्यापक अभि सुवेदी रिसर्च गर्न जापानको टोकियो विश्वविद्यालय जानुभयो । एक वर्षपछि उहा“ फर्कंदा हामीले विश्वविद्यालय छोड्ने बेला हुन–हुन लागिसकेको थियो । अभिसरले उत्तरआधुनिक भनी मानिएका केही अंग्रेजी कविताहरु पढाउनुभयो, हामीलाई एमए दोस्रो वर्षमा । उहा“ले कविता पढाउँदा कुलोमा पानी बगेझैँ कविताबाट केही बग्न थाल्थ्यो । हामी तरंगित हुन्थ्यौँ । एउटा कवितालाई व्याख्या गर्दा उहा“ उस्तै अरु कविताहरुको सहारा लिनुहुन्थ्यो । त्यसैले, कीर्तिपुरका तोरीबारीमा आफूले पृथ्वी घुम्दै गरेको गुह्य काव्यात्मक रहस्य बेलाबेलामा भन्नुहुन्थ्यो । कीर्तिपुरमा अभिसरका क्लासहरु सिद्धिए । हामी पनि जा“चको तयारीमा जुट्यौँ । त्यसपछि उहा“स“गका हाम्रा भेटहरु व्यक्तिगत हु“दै गए । अभिसर अंग्रेजी केन्द्रीय विभागको प्रमुख हुनुभयो । हामीले चिनेका अनि बुझेका अभिसर आफूस“गै लिएर आ–आफने गन्तव्य नाप्यौँ ।
अभि सुवेदीले आज्र्याको बारी ः
अभि सुवेदीस“गको मेरो व्यक्तिगत सम्पर्क रंगमञ्चकलाको माध्यमबाट हुन थाल्यो । उहा“का केही अंग्रेजी कविताहरुलाई रंगमञ्चीय स्वरुप दिन लाग्नुभएको थियो, मेरा आदरणीय गुरू अनि अभि सुवेदीका अति प्यारो विद्यार्थी डा. अरूण गुप्तोले । सन् १९९९ को सेप्टेम्बरमा, त्यो रंगमञ्चीय प्रस्तुतिको नाम थियो, रिवर स्टेज अथवा नदी रंगमञ्च । त्यो प्रस्तुतिमा मलाई दिइएको संवाद थियो, गेट् लस्ट् । विभिन्न समय र सन्दर्भमा बोल्नुपर्ने त्यो एकल संवाद मैले तीनचोटि बोलेँ । प्रस्तुति सिद्धियो । त्यो प्रस्तुति नेपालका कलाकार, लेखक र विचारकहरुले बडो मन पराएर हेरेका थिए । मैले उक्त नाटकका संरचनामा उत्तरआधुनिक पक्ष, सुवेदीका शब्दपछाडि अल्झेर आएका जीवन र आकाश, डा. गुप्तोका रंगमञ्चीय व्याख्या र किरण मानन्धरले बग्दै गरेको बागमतीको पानीमा कोरेका चित्रका अर्थहरु मात्र देखिनँ, त्यो प्रस्तुतिमा त्यस सा“झ । मैले त्यहा“ देखेँ, अभि सुवेदीले रचना गरेको समय र समाज । त्यतिका धेरै नेपाली विचारक, लेखक र कलाकारहरु एकै ठाउँमा भेला भएर हाम्रो प्रस्तुति हेरिरह“दा मैले अलिकता चुनौती अनुभव गरेको थिए“ । म त्यस सा“झ वास्तवमा अभि सुवेदीले आफ्ना बलबाहुले रच्नुभएको समयभित्र थिए“ । अभि सुवेदीले गर्ने काम र राख्ने विचार एउटा बलियो अनि विश्वासिलो छाप अथवा मानक भइसकेको थियो । त्यसदिन मैले अभि सुवेदीले निकै समय लगाएर आज्र्याको कला, विचार र साहित्यको फूलबारीको एउटा सानो झुल्को देखेँ ।
भोलिपल्टका पत्रिकाहरुमा त्यस प्रस्तुतिको रिभ्यू आएको थियो । अभि सुवेदी र उहा“ले गर्दै गरेको यात्रा अनि उहा“का व्यक्तिगत अनुभव अनि विचारहरु नेपालका प्रमुख पत्रपत्रिकाहरुलाई चाहिने आवश्यक खुराकहरुमध्ये एक भएको मलाई बिस्तारै थाहा हु“दै गयो । नेपालका नाम चलेका पत्रकार अनि सम्पादकहरु अभिसरलाई तिनको पत्रिकाका लागि लेखिदिन अनुरोध गर्दै गरेको म देख्दै गए“ । अनि यो देशका सिर्जनशील व्यक्तिहरुका लागि अभि सुवेदीका काम र विचारहरु एउटा चासोको विषय भएको मैले केहीदिनमा नै अनुमान गर्न थालेँ ।
मेरो रंगमञ्चको यात्राले केही गति लिन थाल्यो । म अभि सुवेदीस“ग नजिक हु“दै गए“ । उहा“स“ग भइरहने भेटहरुले गर्दा मेरा लेखक हुने सपना सजिलो भएर बस्न थाल्यो । मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहिरको नेपाली कला तथा साहित्यको सिर्जनशील जगत्मा अभि सुवेदीले रचेका आयामहरु बिस्तारै खुल्दै जान थाले । चालीस वर्षदेखि नेपाली साहित्य र कला क्षेत्रमा लागेको मानिस निकै अर्थमा एउटा मह¤वपूर्ण जिउ“दो इतिहास हो । नेपाली साहित्य र कला इतिहासको गर्भबाट निस्केर नाटककार बालकृष्ण सम, पेन्टर चन्द्रमान मास्के, गायक नारायणगोपाल, कवि केदारमान व्यथित र निबन्धकार केशवराज पि“डालीका व्यक्तित्व र कृक्तित्व बेलाबेलामा अभिसरका आख्यानहरुमा एकछिनका लागि भने पनि अभिनीत हुन आइपुग्थे । यसो भएको देख्दा मलाई निकै दिनसम्म पुग्ने आनन्दका झट्का लाग्थे । बिस्तारै अभिसर मलाई नेपाली कला अनि साहित्यकै रंगमञ्चजस्तो लाग्न थाल्नुभयो ।
नारायणगोपाल म एसएलसी पास भएको मार्कसिट र आफ्नो सपना बोकेर काठमाडौँ छिरेको दिन नै बितेका थिए । उनलाई जिउँदै भेटेको भए म धन्य हुनेथिएँ होला । तर, नारायणगोपाल अभिसरका संस्मरण अनि स्वरहरुमा बोल्थे अनि गाउन थाल्थे । त्यस्तै, उहा“ले मलाई अमर गुरूङ र गोपाल योञ्जनले बसालेको नेपाली आधुनिक संगीतको जगस“ग परिचय गराई दिनुभयो । अभिसरका स्वरमा नेपाली संगीत र गायनको इतिहासका केही मह¤वपूर्ण क्षणहरु सुन्न थालेँ । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठस“ग मेरो कहिल्यै भेट भएको थिएन । उहा“ बित्नुभएको निकै वर्ष भइसकेको थियो । मलाई उहा“का कविताहरु निकै मन पर्थे । तर, अभिसरले मलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठका आवाजमा उहा“का निकै कविताहरु वाचन गरिदिनुभयो । श्रेष्ठस“ग अथवा काजीदाइस“ग उहा“ले बिताउनुभएका विभिन्न क्षण र घटनाहरु सुनाउनुभयो । मलाई नेपाली साहित्यको इतिहास एउटा परिचित आ“गनजस्तो लाग्न थाल्यो । अभि सुवेदीको आफ्ना समकालीन साहित्यकारहरुस“गको सम्पर्क अनि सम्बन्ध त प्रस्ट देखिन्थ्यो । तर, युवापुस्ताका भख्खरै अंग्रेजी अनि नेपाली भाषामा कविता कोर्दै गरेका, क्यानभासमा रङस“ग मितेरी गा“स्न सिक्दै गरेका अनि रंगमञ्चमा काम सिक्दै गरेका कलाकारहरु, अभिसरस“ग भूमिका लेखाई माग्न अथवा उनीहरुको सिर्जनामाथि केही बोलिदिन अनुरोध गर्न आउँथे ।
नेपाली साहित्य र कला क्षेत्रको इतिहास, वर्तमान र भविष्य अभिसरमाथि त्रिवेणी भएर खसेको म बेलाबेलामा देखिरहन्थेँ । मलाई त्यस्तो त्रिवेणी निकै आकर्षक लाग्दै जान थाले । अभिसरलाई भूमिका लेखाउन खोज्दै आउने ती युवापुस्ताका कलाकार र साहित्यकारहरुलाई हेर्दा र भेट्दा मलाई कुनै समय खासगरी साठी र सत्तरीको दशकमा नेपालका विभिन्न पुस्ताका कलाकार र साहित्यकारहरुस“ग निर्धक्कले हि“ड्ने, तिनका कृतिमाथि समीक्षा लेख्ने अनि आफ्नै कविता र निबन्ध लेख्दै हि“ड्ने, सपना अनि लक्ष्यले निर्देशित एक जना सुन्दर, युवा साधक अभि सुवेदीको चित्र झन् बलियो भएर आउन थाल्यो । अनुभव र चेतनामा इतिहास राखेर यात्रा गर्ने मानिस एउटा यस्तो मह¤वपूर्ण स्पेस अथवा स्थान हो, जहा“ सपनाले सकसकाएर यात्रा गर्न निस्केकाहरु केहीछिन भेट्न अथवा रोकिन आइपुग्छन् । म त्यस्ता निकै भेटहरु देख्दै गए“, अभिसरको वरिपरि । पत्रकार शेखर खरेलजीले यहीबेला एउटा डकुमेन्ट्री बनाउन थाल्नुभयो, अभिसरले काठमाडौँमा गर्नुभएको महायात्रालाई विषयवस्तु बनाएर । अभिसरलाई डकुमेन्ट्रीको केन्द्रबिन्दु बनाएर शेखरजी काठमाडौँकेन्द्रित कला, साहित्य अनि संस्कृति खासगरी सन् १९७० दशकको बार्दली चढ्दै हुनुहुन्थ्यो ।
विश्वविद्यालयमा मैले पढेका टी. एस. इलियटको ‘ट्रेडिसन् एण्ड दी इन्डिविजुवल ट्यालेन्ट’ भन्ने लेख र वाल्टर बेन्जामिनले इतिहासमाथि राखेका केही बहसहरु मलाई निकै मन पर्थे । कवि तथा समालोचक इलियट भन्छन्, कुनै एक साहित्यकार अथवा कलाकारको उसका पूर्वज सर्जकहरुस“ग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । इतिहासको कालखण्डलाई आत्मसात् नगरी एउटा सर्जक सफल हुन सक्दैन । जसले इतिहास बुझ्यो अथवा त्यसमाथि मन्थन गर्न सक्यो, त्यसले भविष्य पनि बुझ्न सक्छ । त्यस्ता विचारक अनि सर्जकलाई इतिहास बोझ होइन, उडानका लागि चाहिने ऊर्जाशक्ति हुन्छ । विचारक बेन्जामिन भन्छन्, इतिहास कहिले पनि सकिँदैन । यो पुनरावृत्ति भइरहन्छ । जसले इतिहासमा भएका उतारचढावलाई बुझ्छ, इतिहासले लिएको गति अथवा मोड बुझ्न सक्छ, उसले वर्तमान समयमा इतिहास जित्न सक्छ । इलियट र बेन्जामिनजस्ता विचारकहरुले उजागर गर्न खोजेको गुह्य यथार्थ नेपाली कला अनि साहित्यको इतिहास र वर्तमानको सन्दर्भमा अभि सुवेदीलाई राखेर हेर्दा केही प्रस्ट भएजस्तो मलाई लाग्न थाल्यो ।
अभि सुवेदीले मलाई नेपाली साहित्य र कला–इतिहासका बिभिन्न स्वरुपका बार्दलीहरु डुलाइदिन थाल्नुभयो । त्यस्ता बार्दलीहरु मैले पढेर अनि कति अभिसरबाट सुनेर आ“कलन गर्ने काम गरे । मैले उहा“ अनि उहा“का लेखहरुबाट ‘शारदा’ र ‘रुपरेखा’ साहित्यिक पत्रिकाले समातेको नेपाली साहित्यिक चेतना र ऐतिहासिकीस“ग परिचित भए“ । नेपालमा माक्र्सवादी समालोचकहरुले विभिन्न समयमा उठाएको चिन्तनस“ग परिचित भए“ । मलाई आधुनिक नेपाली कला र साहित्य खासगरी साठीको दशकभन्दा यताका इतिहास एउटा पढिएको र सुुनिएको पाठ हु“दै गयो । मैले उहा“बाट बुझेको पहिलो मह¤वपूर्ण कुरा थियो । नेपाली कला–साहित्यको इतिहासलाई कल्पना र विचारको उडान लिएर आ“कलन गर्न सक्षम हुन निकै साधना गर्नुपर्छ । दुई–चार दर्जन पश्चिमेली साहित्य र कलामाथि राखिएका वा लेखिएका सिद्धान्त बुझेका भरमा नेपाली साहित्य र कला विशेषज्ञ हुन खोज्ने भ्रमबाट सधैँका लागि मुक्त हुनुपर्ने यथार्थ अभिसर मलाई किसिम–किसिमका उदाहरण दिएर बताउनुहुन्थ्यो ।
भानुभक्त आचार्यलाई मैले बालक ह“ुदा सुनेको अनि मन पराएको थिए“ । मेरो घरमा रामायण वाचन एउटा धर्मजनीन कर्म थियो । बाआमा मलाई रामायणभन्दा पनि कोर्सका किताब पढ्न जोस दिनुहुन्थ्यो । तर, अभिसरले वाचन गर्नुभएको भानुभक्तको रामायणलगायत अन्य कविताहरुमा मैले साहित्य–प्रेम, साधना अनि संस्कार देखेँ । उहा“ आफ्नो आमा र भानुभक्तलाई एक ठा“उमा ल्याउनुहुन्थ्यो । आमाको सम्झना ह“ुदा उहा“ अहिले पनि त्यसो गरिरहनुहुन्छ । तेह्रथुम सावलामा अभिसर बालक हु“दा माताजीले सुनाउनुभएको भानुभक्तको रामायणका श्लोकहरु उहा“लाई अझै पनि कण्ठस्थ आउँछ । आमा र भानुभक्त मिसिएको संस्कार छुट्याउनै नसकिने गरी उहा“को जीवनमा एकै ठाउँमा आउनु मलाई केही अर्थपूर्ण अझै पनि लागिरहन्छ ।
अभिसरले अंग्रेजी भाषा र साहित्य पढाउ“दै अनि त्यसैमा प्रेम र विश्वासले लेख्दै आउनुभएको तीसौँ वर्ष भएको उहा“कै क्लास लि“दा नै थाहा भइसकेको थियो । उहा“का कृतिहरु पढ्दै गएपछि मलाई उहा“ले हि“डेका सपनाका नक्साहरु खुल्दै गए । उहा“ले भानुभक्तदेखि देवकोटा, पौडेल अनि उहा“का समकालीन कविहरुका कविताहरुमाथि समालोचना लेख्नुभएको रहेछ । नेपाली कला र साहित्यमाथि भएका तेस्रो आयामदेखि यताका प्रयोगहरुलाई नजिकैबाट नियालेको मात्र होइन, त्यसका बारेमा लेख्नु पनि भएको रहेछ । आधुनिक कविता अनि निबन्ध साहित्यमा निकै बलियो स्थान बनाइसक्नु भएको रहेछ । जापानी हाइकु शैलीमा कविता लेखेर नेपाली साहित्यलाई नया“ धार दिनुभएको रहेछ । यसरी अभिसरले लेख्नुभएका समालोचनात्मक अनि सिर्जनात्मक कृतिहरु पढेर उहा“का साहित्यिक बायोग्राफी मलाई खुल्दै गए ।
तर, नेपाली रंगमञ्च–कर्मको सिलसिलामा मेरो उहा“स“ग दिनका दिनजस्तो भेट हुन थाले । मलाई अभि सुवेदी, एक जना स्वप्नधारीको जीवन सजीव ढंगमा आउन थाल्यो । अभिसर नेपाली साहित्यमा केही नया“ धार ल्याउन सकेका कविताका पंक्तिहरु गुनगुनाउनुहुन्थ्यो । यो सुन्दा अभिसरले कविता लेखनको संस्कृतिलाई वरण गर्नुभएको संस्कार मैले प्रस्ट बुझ्न थालेँ । तेह्रथुम सावलामा भै“सी चराउ“दै अंग्रेजीमा लेखिएका अथवा अनुवाद भएका उपन्यास पढ्दै जा“दा साहित्य चेतना बलियो भएको उहा“ भन्नुहुन्थ्यो । यो सुन्दा मलाई आफैँ हुर्केको तराईको अकिञ्चन गाउँ अनि भै“सीको सम्झना अनि लेखक हुने आफ्ना सपना झनै ताजा भएर आउन थाल्थे । उहा“ गैरीखेतमा रोपाइँ गरेर लोत् परेको, आमाले जीवनमा सपना बुन्न सिकाएको, घरबाट लुसुक्कन भागेर पुष्पलाललगायत अन्य नेताका भाषण सुन्न गएको, विद्यालयमा ह“ुदा गणित विषय अति गाह्रो लागेको आदि इत्यादि भन्नुहुन्थ्यो । लेखनाथ पौडेलको फलेको वृक्ष जहिले पनि निहुरिएको हुन्छ, त्यसैले असल व्यक्ति स्वभाव र आचरणमा सधैँ निहुरिन्छ भन्ने अर्थ भएको प्रसिद्ध कविताबाट प्रभावित भई निकै दिनसम्म निहुरि“दै हि“ड्दा झन्डै कुप्रो भएको अनुभव सुनाउनुहुन्थ्यो । विद्यार्थी जीवनमा धरानमा बस्दा क्रान्ति गरेको, अञ्चलाधीशको गोलीबाट बचेको अनि रातारात वीरपुर नाका हु“दै भारत छिरेको, काठमाडौँमा एउटा थुक्पाको भरमा कुनै–कुनै दिन कटाएर आफ्ना लेखक हुने सपना बचाइ राखेको अनि हिप्पी भनिने पश्चिमेली युवायुवतीहरुलाई एक्कासि काठमाडौँ आएको देख्दा आफूमा भएको विद्रोही स्वभावले नया“ र सिर्जनशील मोड लिएको अनुभव भन्नुहुन्थ्यो । मलाई यो सबै सुन्दै जा“दा नेपाली साहित्य र कला क्षेत्रमा प्रेम र विश्वासले लागेको एक जना कर्मशील अनि सुन्दर कल्पना भएको एउटा व्यक्तिलाई झनै चिन्दै गएको अनुभव हुन थाल्यो ।